Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Fasaxyada xeebaha ayaa ah doorashada ugu jecel Ingiriiska
La yaab maaha in ku dhawaad ​​kala badh dadka fasax-qaatayaasha ahi ay rabaan inay aadaan meel loo tamashle tago oo qorrax leh - gaar ahaan xagaagii Ingiriiska ayaa haddana niyad-jab ku noqday dadkii joogay.
Nasashada xeebta duullimaad-iyo-flop waa doorashada ay ugu jecel yihiin dadka Ingiriiska ee doonaya fasaxa dibadda sannadka soo socda, ayaa daaha ka qaaday cilmi-baadhis ay maanta (Isniin 1-da Noofambar) soo saartay WTM London.
Ku dhawaad ​​kala badh (43%) ayaa qorshaynaya inay u baxsadaan cimilo shisheeye ayaa sheegay in fasaxa xeebta uu yahay dookhooda ugu sarreeya.
Doorashada labaad ee ugu caansan waxay ahayd nasasho magaalo, oo ay xuseen saddex meelood meel (31%) jawaab bixiyaasha. Doorashooyinka kale ee caanka ah waxay ahaayeen fasaxyo tacabur (16%), dalxiis (15%), fayoobi (8%) iyo barafka (7%).
Waxaa laga yaabaa in ka tarjumaysa xaqiiqda ah in aragtida safarka ay aad u xaddidan tahay 2020 iyo 2021, ku dhawaad ​​rubuc (23%) waxay sheegeen inay rabeen inay aado safar dheer, halka 17% ay ku qanacsan yihiin fasax gaaban.
Habka ballan-qaadashadu sidoo kale wuxuu u muuqdaa mid ka tarjumaya dhibaatooyinka baahsan ee lacag-celinta fasaxyada iyo baajinta inta lagu jiro masiibada, iyadoo saddex meelood meel macaamiisha (31%) ay sheegeen inay ballansan doonaan xirmo, oo kaliya 8% ay doortaan hoyga dhaqaalaha wadaagga - sida sida AirBnB - halka 8% kale ay sheegeen inay ku farxi doonaan fasaxa DIY.
Natiijooyinka ayaa ka yimid Warbixinta Warshadaha WTM, oo 1,000 macaamiil ah ka warbixisay qorshahooda safarka - 648 ka mid ahina waxay sheegeen inay jeclaan lahaayeen inay fasax dibadda ah ku qaataan xagaaga soo socda.
Markii ay cod-bixiyayaashu weydiiyeen meesha ay jeclaan lahaayeen inay aadaan, meesha ugu sarreysa waxay ahayd Isbaanishka, oo ay ku xigto dhaqammada kale ee Yurub ugu cadcad sida Faransiiska, Talyaaniga iyo Giriigga, iyo Mareykanka - oo ka mamnuuc ah fasax-bixiyeyaasha Ingiriiska tan iyo markii uu cudurku dillaacay. la qabto March 2020.
Cilmi-baadhistu waxay noqon doontaa war soo dhawayn ah oo loogu talagalay ganacsiga safarka ee wakhtiga firaaqada ah, kaas oo la halgamaya ku dhawaad ​​​​laba sano oo qalalaase, xayiraad iyo fariimo jahawareer ah oo ka yimid wasiirrada.
Cilmi baaris ay sameysay Abta ayaa soo jeedisay in xagaaga 2021 boos celintu ay 83% hoos u dhacday 2019 ku dhawaad ​​kala bar shirkadaha safarka ayaa soo sheegay wax koror ah oo la sameeyay 2021 marka la barbar dhigo sanadkii hore, in kasta oo barnaamijka tallaalka uu arkay in ka badan 80% dadka qaangaarka ah ee UK ee u qalma durba si buuxda loo jabiyay.
Guddiyada dalxiiska ee ka imanaya meelaha ay ka midka yihiin Spain, France, Italy, Greece iyo USA ayaa durbaba kor u qaadayay hawlahooda xayaysiis xagaagii si loo hubiyo in wadamadoodu ay maskaxda ku hayaan ganacsiga iyo macaamiisha.
Shirkadaha diyaaradaha iyo hawl-wadeennada ayaa kor u qaadayay awoodda markii dalabaadku soo noqday, gaar ahaan marka xannibaadaha sida nidaamka iftiinka taraafigga iyo tijaabooyinka PCR la fududeeyo.
Simon Press, WTM London, Agaasimaha Bandhiga, ayaa yiri: "Waxaan u dulqaadanay ku dhawaad ​​laba sano oo xayiraad safarka ah iyo jahawareer, qawaaniin qaali ah sidaa daraadeed la yaab ma leh in ku dhawaad ​​kala bar dadka fasaxa ah ay rabaan inay u jiheystaan ​​xeebta qoraxda - gaar ahaan sida xagaaga Ingiriiska uu leeyahay. mar kale niyad jab ayay ku noqotay dadka joogga.
"Intayada badan waxaa lagu dejiyay guriga inta lagu jiro xiritaanka, qaar badan oo naga mid ah ayaa wali ka shaqeyneynaa guriga, marka rajada lagu nasto qolka qorraxda ee Med waa mid aad u soo jiidasho leh."